अख्तियार प्रमुखमा प्रेम कुमार राईले सपथ लिएसँगै झस्कियो पुमा समूह, जेल जाने डरले आम हड्तालको घोषणा ! - Updatekhabar.com Updatekhabar.com
अख्तियार प्रमुखमा प्रेम कुमार राईले सपथ लिएसँगै झस्कियो पुमा समूह, जेल जाने डरले आम हड्तालको घोषणा !
पुस्पकमल दाहाल र माधव नेपाललाई अब भ्रष्टाचार केसमा जेल जानु पर्ने डरले पोल्न थालेको छ
काठमाडौं । नेकपा पुस्पकलम–माधव (पुमा) समूहले भोलि बिहीबार आम हड्ताल गर्ने घोषणा गरेको छ । चर्चित बालुवाटार सरकारी जग्गा काण्डको छानविनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका प्रेमबहादुर राईको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा इन्ट्री भएसँगै प्रचण्ड माधव समुह अतालिएको हाे । अख्तियारको प्रमुख आयुक्तका रुपमा राईको प्रवेश भएपछि बालुवाटार काण्डले प्राथमिकता पाउने भएपछि उनिहरु डराएका हुन। जसको बिरोध स्वरुप उनिहरुले भोलि देशव्यापि हडतालगर्ने घोषणा गरेका छन् ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले सपथ ग्रहण गरेसँगै पुमा समूहमा तरंग गएको हो । समूहले आफ्नो आन्दोलनको कार्यक्रम परिमार्जित गरेकोभन्दै हठातरुपमा आम हड्ताल गर्ने निर्णय गरेको छ । अख्तियारमा आफ्नो भाग खोजिरहेका पुष्पमल दाहालले आफ्नो मानिस नियुक्र गर्न नपाउँदा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्घ अविस्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढाल्न खोजेका थिए । प्रस्ताव आउनु अघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेसँगै पार्टीबाट विभाजित बनेको उक्त समूह संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले सपथ खाएसँगै आफ्नो फाइल बढ्ने डरमा छन् ।
अख्तियारमा पुष्पकमल दाहालको सेना समायोजनका बेला क्यान्टोमेन्टमा गरेको घोटालाको फाइल छ भने अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको बालुवाटारको सरकारी जग्गा किर्ते गरेको फाइल छ । यी फाइल अघाडी बढे आफुहरु जेल जानु पर्ने भएले पुमा समूह अतालिएको भन्दै समाजिक संजालमा आम हटताल लगायतका कार्यक्रमको तिब्र विरोध सुरु भएको छ । धेरै जसोको तर्क छ पुस्पकमल दाहाल र माधव नेपाललाई अब भ्रष्टाचार केसमा जेल जानु पर्ने डरले पोल्न थालेको छ ।
अख्तियार प्रमुखमा प्रेम कुमार राई र आयुक्तमा जयबहादुरको प्रवेश
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्ति गर्नुभएको थियो । उहाँहरुको आजै पद तथा गोपनियताको शपथ भइसकेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार अख्तियारको प्रमुख आयुक्तको रुपमा प्रेम कुमार राईको प्रवेश भएको छ । उहाँ पूर्व गृहसचिव हुनुहुनथ्यो।
यस्तै अख्तियारको आयुक्तमा जयबहादुर चन्दको समेत नियुक्ति भएको छ । अख्तियारकै आयुक्तको रुपमा किशोर कुमार सिलवाल पनि नियुक्त हुनुभएको छ ।
यस्तै निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन आयुक्तको रुपमा राम प्रसाद भण्डारी र डा जानकरी कुमारी तुलाधरको प्रवेश भएको छ । यस्तै मानवअघिकार आयोगको अध्यक्षमा तप बहादुर मगर नियुक्त भएका छन् भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगमा पनि प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् ।
पुस ३० गते बसेको संबैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको थियो ।
नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त राईले अख्तियारमा कार्यभार समाल्न सुरु
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय, शितलनिवासमा सपथ ग्रहण गरेलगत्तै टंगालस्थित कार्यालयमा आएर उहाँले कार्यभार सम्हाल्नुभएको हो । राईसँगै आयुक्त किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्दले पनि कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ ।
अख्तियारका कर्मचारीहरुले राईसहितका अन्य आयुक्तहरुलाई स्वागत गर्नुभएको थियो ।